Chikumbiro chakatanga: "Bvisa Kuurayiwa kweVadzimi veMoto Kubva 'kuHalloween Kunouraya'"
musha Varaidzo Nhau Petition Inoverengwa: "Bvisa Kuurayiwa kweVadzimi veMoto Kubva 'kuHalloween Kunouraya'"
Petition Inoverengwa: "Bvisa Kuurayiwa kweVadzimi veMoto Kubva 'kuHalloween Kunouraya'"
Kune kunyange counter petition kune ichi chikumbiro.
by Timothy Rawles October 8, 2021 51,478 maonero
Zvinotaridza sekuti vamwe vanhu havasi kufara nezvechitsva Halloween firimu sezvatiri. Kunyanya, vanhu vanofunga kuti vanodzima moto vanofanirwa kuve nehutachiona kupokana nemasked serial mhondi uyo ane masimba emweya.
Jessie Streeter akagadzira chikumbiro "kumisa kuuraya kwevanodzima moto pa" petition.org June apfuura. Chikumbiro chakangobva kubata pamhepo sezuva rekuvhura re Halloween Inouraya inoswedera padyo.
Streeter anoti ivo vava kuve muridzi wemoto uye kusaremekedza kuuraya mumwe, kunyanya mushure mekunge mumwe aedza kuponesa hupenyu hwemhondi. Chiitiko chiri mubvunzo chinouya zvingangodaro pakutanga kwefirimu kana yedu Wokupedzisira Mukadzi Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ari kuendeswa kuchipatara mushure mekupeputsa imba yake kuti auraye Michael Myers.
Ngatitaurei vazvitsanangure nemazwi avo pachavo:
“Ndinoda chiitiko chiri mufirimu nyowani Halloween Kills apo vanoratidza Kuuraiwa kwevanodzima moto. Hazvina kunaka nekuti vanodzima moto vakakwevedzwa kuti vapinde mudzimba moto uye vakapondwa nemunhu akabatidza moto. Uye hazvina kunaka kuti Michael akauraya vanodzima moto negear kubva kune vamwe vanodzima moto vaakauraya. Sekukurumidza kuve murwi wemoto ndinoona zvichinyanyisa uye ndizvo zvinoita amai vangu nababa avo vari pamudyandigere firefighters. Saka ndinoda kuti chiitiko ichocho chibviswe mufirimu. Michael aisafanirwa kuvauraya nenzira yavakamuponesa saka aifanira kunge akanunura vanodzima moto vaviri mumba ndokuenda kunouraya hanzvadzi. Iko hakuna chikonzero cheichi chiitiko chinotyisa chinosemesa. Kunyanya kubvira zvaitika muhupenyu chaihwo. Sezvandamboreva vanodzima moto vasati vanyengererwa kuisa moto uye kuuraiwa neimwe pfungwa muhupenyu chaihwo. ”
Chikumbiro chakatotora masiginecha gumi nemaviri chete kubva pane zana aifanira kuiswa panzvimbo iyi. Munguva pfupi yadarika vamwe vakasiya zvataurwa, vachiseka uyo anenge akumbira kukwidza nyaya nekutuka-tuka nemitauro yakaipa.
Mumwe munhu akatobvunza kuti: “Tinogona here kutanga chikumbiro kuti tipedze chikumbiro ichi? Uku dumber kupfuura Kumuka kweHalloween. "
Ehe hongu, zviripo. Inonzi: "Mira chikumbiro kubvisa kuuraya kwevanodzima moto muHalloween Inouraya 2021," yakatangwa naBrandi Slavens neChitatu chapfuura senge ruzha rwe Halloween Inouraya harnesses imwe chaiyo fan fan.
Hechino chikumbiro chaBrandi:
"Munguva pfupi yapfuura chikumbiro chakatanga pa change.org kuti kuurayiwa kwevanodzima moto vabviswe mufirimu idzva reHalloween, Halloween inouraya (ichiburitsa Gumiguru 15, 2021). Ndinoda kuti imiswe sezvo anenge munhu wese akaurayiwa mune yega inotyisa bhaisikopo akambove nebasa… Kuuraya ndizvo zviri mafirimu aya zviri pachena. Izvo chaizvo hapana munhu ari kukuvadzwa mukugadzirwa kweiyi bhaisikopo ndinokuvimbisa iwe. Chikumbiro chose kupusa. Ndine chokwadi chekuti kune boka guru revateveri veHalloween vanozobvuma. "Ndibatsirei kuti ndichengetedze Michael Meyers mubhizinesi…. Ndatenda."
Saka tiudze zvaunofunga nezvese evavaverengi vanodiwa, uye tizivise kana uchizoona Halloween Inouraya panzvimbo yemitambo kana kuifambisa Peacock musi waOctober 15, 2021.